Xaashi Cumar Xasan oo 19-sano ku Xirnaa Talyaaniga oo wax dambi ah lagu waayay lana siidaayay
Maxkamad ku taalla Wadanka Talyaaniga ayaa Maanta wax dambi ah ku weysay Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabo Xaashi Cumar Xasan oo 19-Sano ku Xirnaa Talyaaniga loona haystay Gabar Wariye ah oo Muqdisho lagu Dilay . Maxkamadda ayaa ku dhawaaqday in Xaashi lagu waayay Dambigii lagu soo oogay islamarkaana Mudada dheer uu ugu Xirnaa Talyaaniga. Sidoo kale […]
Hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobeey waxay sheegeysaa in inkabadan 900 oo qof ay ka qexeen magaalada Moosil ee dalka Ciraaq. Dadkaasi ayey hay’adda sheegtay inay ka gudbeen xuduudda Ciraaq ay la wadaagto dalka Suuriya. Waa markii ugu horeysay ee la xaqiijiyo in dad badan ay ka qaxayaan Moosil tan iyo markii ciidamada Ciraaq ay bilaabeen inay […]
Madaxweynaha Soomaliya oo Amray in Baaritaan Lagu Sameeyo Weerarkii Shabaab ay Ku kaaqeen Afgooye
Madaxweynaha Soomaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud oo kulan kula qaatay xarunta Madaxtooyada Soomaliya Wasiirada iyo Taliyayaasha amniga dalka ayaa kala hadlay weerarkii Xarakada Shabaab shalay galab ay ku qaadeen degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose. Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda Soomaliya aysan marnaba u dulqaadan doonin in shabaab ay dharaar cad weerar ku […]